RASMI: Xiriirka kubadda cagta Yurub oo ku dhawaaqay in la kordhinayo tirada xiddigaha xulalka uga qeyb-galaya tartanka Euro 2020 – Gool FM
Haaruun May 4, 2021
(Yurub) 04 Maajo 2021. Xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu kordhin doono tirada xiddigaha xulalka uga qeyb-galaya tartanka qarammada qaaradda Yurub ee 2020, isla markaana la gaarsiin doono 26 ciyaaryahan halka markii hore ay ka ahaayeen 23-ka ciyaaryahan.
Xiriirka UEFA ayaa sidoo kale shaaciyey in diiwaan-gelinta safafka kaga qeyb-galaya xulalkooda tartanka EURO 2020 ay ugu dambeyn ku eg tahay 01 bisha June.
Tartanka qarammada Yurub ee bilaaban doona 11 bisha June ee xagaagan iyo safafka ka qeyb-galaya ayaa waxaa waajib ah in la diiwaan geliyo 10 maalmood ka hor inta uusan bilaaban tartanka.
UEFA ayaa si rasmi ah u shaacisay inay safafku ka koobnaan karaan 26 xiddig, waxaana wax laga beddeli karaa kaliya ka hor ciyaarta koowaad ee tartanka.
“Safafka EURO 2020 waxaa ka soo muuqan doona 26 ciyaaryahan” ayaa u dhignaa bayaan ka soo baxay UEFA.
Waxaana ay intaa raaciyeen in liisaska xiddigaha la soo gudbin doono 01 June, laakiin xulalku ay awoodaan inay isbedel ku sameeyaan safafkooda ka hor ciyaarta koowaad haddii ay jiraan dhaawacyo halis ah ama xanuunno.
Si kastaba xulalka ayaa awoodi doona inay isbeddel ku sameeyaan goolhayeyaasha ka hor kulan kasta sida ay xaqiijisay UEFA.
Dhaawacyada halista ah iyo xanuunnada waxaa qeyb ka noqon kara xanuunka faafay ee Korona Fayras iyo si la mid ah inay xiddiguhu ay xiriir la sameeyeen qof qaba Fayraskan.
Ciyaartoyda xulka qaranka Talyaaniga ayaa qaatay Tallaalka KOFID 19 ka hor tartanka sida uu shalay xaqiijiyey Gabriele Gravina oo ah Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ee magaciisa loo soo gaabiyo FIGC.
RASMI: Kooxda Roma oo xaqiijisay in Macallinkeeda uu ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii...